Malunga nathi -Hong Bang Packaging Co., Ltd.
Ukupakishwa kweHong Bang Co., Ltd.
eyasekwa ngo-2000, i umenzi abanobuchule e-China iingcali ngeplastiki umbala-yoshicilelo kunye wokulaminetha izinto ukupakishwa bhetyebhetye, vacuum metallized bhanya kunye bhanya multi-functional.
Iimveliso zethu zigubungela ukutya, imichiza yemihla ngemihla, amayeza, i-agrochemicals, i-elektroniki, izinto zokwakha kunye neminye imimandla. Ngoku sineenkxaso ezintathu, iHong Bang (Hong Kong) yokuPakisha, iHong Bang (HUIZHOU), ethi bonke bonwabele ukufikelela kwezothutho okufanelekileyo eHong Kong naseShenZhen port.
Efektri yethu ibekwe HuiZhou.
Wamkelekile ukutyelela indibano yethu yokusebenzela engenothuli.
Umzi-mveliso wethu uyahlangabezana nomgangatho woomatshini noomatshini abazisebenzelayo. Abasebenzi bethu ngoqeqesho kwimveliso yobungcali, ngokungqongqo landela imigangatho yemveliso yokusebenza. Ngoku inkampani yethu ixhotywe ngemigca yemveliso engaphezulu kwamashumi asibhozo kubandakanya iiprinta ezinemibala elishumi elinesine, i-laminators ezinesantya esiphezulu, oomatshini bokwenza iibhegi kunye noomatshini bokufota abasebenza ngemisebenzi emininzi.
Imifanekiso engaphezulu yeFektri
Sithobela ngokungqongqo i-ISO9001, i-ISO14001 kunye ne-ISO22000 yenkqubo yolawulo, sikwanamalungelo awodwa omenzi wechiza we-BRC, i-FDA kunye nama-63. Sinikezela ngezisombululo zokupakisha, uyilo kunye nokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso eziprintiweyo zokupakisha umbala. Kuba sikholelwa ekubeni izinto ezintsha ziya kukhokelela kwikamva eliqaqambileyo, siyazinikezela ekwenzeni uphando kunye nophuhliso iqonga elibalulekileyo kunye nesiseko se-hi-tech esisiseko sezinto eziluhlaza, ngokusebenzisana ngokujulile kunye namaziko ophando oluninzi e-China nakwamanye amazwe. iinkampani zokupakisha ezaziwayo. Ukuzinikela kulawulo lomgangatho olungqongqo kunye nenkonzo yabathengi enolwazelelelo, abasebenzi bethu abanamava bahlala bekhona ukuxoxa ngeemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ukoneliseka kwakho. Nokuba iodolo yakho incinci okanye inkulu, ilula okanye inzima, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Inkonzo elungileyo kunye nomgangatho owonelisekileyo uhlala unawe.